घरै बसी नेपाली चलचित्र हेर्नका लागि डिसहोमले ल्यायो यस्तो योजना ! - Everest Dainik - News from Nepal
घरै बसी नेपाली चलचित्र हेर्नका लागि डिसहोमले ल्यायो यस्तो योजना !
काठमाडौं‌, असोज १२ । डिस मिडिया नेटवर्कले ल्यायो यस्तो योजना ल्याएको छ । अब दर्शक श्रोताहरुले घरै बसीबसी नयाँ नयाँ नेपाली चलचित्र हेर्न सकिने छ ।
नयाँ नेपाली चलचित्र हेर्नका लागि यी तरिकाहरु जान्नुहोस्-
नेपाली कथान चलचित्र ‘धूम ३’ गत असोज ५ गतेदेखि डिशहोम च्यानल नं १०८ मा शुल्क रु. २२५ प्रति शो समय बिहान ८ बजे, दिउँसो १२, दिउँसो ४ बजे र बेलुकी ८ बजे हेर्न सकिने छ ।
याे पनि पढ्नुस यसरी बढ्दै छ डिसहोमको लोकप्रियता गाउँदेखि शहरसम्म
यो सिनेमा खुलाउने ३ तरिका
१. मोबाईलबाट ३२५०० र ३२५८० मा साधारण SMS पठाएर
विहान ८ बजेको शो हेर्नको लागि
SMS Command: MOD CasID a
दिउँसो १२ बजेको शो हेर्नको लागि
SMS Command: MOD CasID b
दिउँसो ४ बजेको शो हेर्नको लागि
SMS Command: MOD CasID c
बेलुकी ८ बजेको शो हेर्नको लागि
SMS Command: MOD CasID d
नोट: CasID को ठाँउमा आफ्नो सेट–टप बक्सको पछाडी भएको ११ अकंको गणितीय CasID नम्बर राख्नुहोस्
२. डिशहोम ग्राहक सेवा केन्द्रमा फोन गरेर १६६० ०१ २२००० वा ०१–४२१७६६६
३. नजिकको डिशहोम बिक्रेतासंग सम्पर्क गरेर यो सिनेमा खुलाउनको लागि ग्राहकहरुले आफुले हेर्न चाहेको शो समय भन्दा अगाडी SMS वा फोन गर्नुपर्नेछ र सेट–टप बक्समा कम्तिमा रु. २२५ ब्यालेन्स रकम हुनुपर्ने छ ।
ट्याग्स: dish media network